प्रेमी प्रेमिका मकैबारीमा गर्दैथिए इलुु इलु, गाउँलेले थाहा पाएर गरे यस्तो हालत? – Hamro24News
July 22, 2021 adminLeaveaComment on प्रेमी प्रेमिका मकैबारीमा गर्दैथिए इलुु इलु, गाउँलेले थाहा पाएर गरे यस्तो हालत?
हाम्रो समाजमा प्रेम अझै स्वीकार्य छैन । नेपाल जस्तै भारतमा पनि प्रेम गर्नेहरु माथि भएका घटनाहरु बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गर्छन् । यस्तै एक घटना भारतको बिहारबाट आएको छ जहाँ मकैबारीमा भेटिएका प्रेमी र प्रेमिकामाथि गाउँले मिलेर नराम्रो ब्यवहार गरेका छन् । यो सबै कुरा समस्तीपुर जिल्लाको कल्याणपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्रको अन्जना पञ्चायतको हो । जहाँ गाउँलेहरूले दुई जना प्रेमीलाई मकैको खेतमा आपत्ति जनक स्थितिमा देखे । त्यस पछि, उनले पहिलो तिनीहरूको भिडियो बनाए र पछि तिनीहरूलाई समाते ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
बिहारको समस्तीपुर जिल्लामा, एक प्रेमिल जोडि प्रेम गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राऊ परेका थिए । त्यसोभएपछि समाजका अगुवाहरूले उनीहरुको पञ्चायतको फैसला सुनाउन ढिलाइ गरेनन् । पहिले, उनीहरुले जोडिको गो प्य रूपमा उसको भिडियो बनाए । त्यो भिडियो सोशल मीडियामा भाइरल भएको छ ।
त्यसपछि दुवैलाई तिनीहरूले रूखमा बाँ धे र पि टे । नाबालिग केटी चि च्या ई, बिन्ती गरिन् र समाजको अगुवाहरूको अगाडि आफ्नो पहिचान सार्वजनिक नबनाउन बिन्ती गरिन् । तर ती व्यक्तिहरूले कडा सजाय दिन कुनै दया देखाएनन् । उसलाई ला त र मु क्काले कु टे । यसपछि धेरै मानिसहरू मैदानमा जम्मा भए ।
अञ्जना पञ्चायतकी एक नाबालिग केटी र मिर्जापुर गाउँका एक नाबालिग केटा बीच गत केही महिनादेखि प्रेम रहेको थियो । त्यो केटा गाउँमा महिलाको श्रृंगारका सामानहरू बेच्न जान्थ्यो । त्यही बिच उनीहरुको प्रेम भयो । दुवैले एक अर्कालाई धेरै माया गर्न थाले । तर उनीहरु नाबालिग भएको र जात पनि नमिलेकोले समाजले उनीहरुलाई स्वीकार गरेन । यसैबीच, आइतवार, मायालु जोडी भेट्न गाउँको मकैको खेतमा पुगे । यसैबीच, गाउँका युवाहरूले मायालु जोडिलाई आपत्ति जनक अवस्थामा देखे ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
दुलहाले बेहुलीकै घरमा विवाहित महिलालाई गरे कर णी, बहिनीले नै किन मिलाइदिइन् त्यस्तो ब्यवस्था?
परिक्षाको तयारीमा रहेका देशैभरिका विद्यार्थीहरुका लागि आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना ! सबैले पढ्नै पर्ने !
खुु”शीको खबर: सा’मान्य लेखपढ भएकोलाई अमेरिकामा काम गर्ने सुनौलो सुवर्ण अवसर, यसरी भर्नुहोस् भि’साको लागि आवेदन !!